Ungayithumela njani ilogo kumthengi ngendlela eyiyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungayithumela njani ilogo kumthengi ngendlela eyiyo yinto ekufuneka igcinwe engqondweni ukuba sifuna ukwenza ifayile ye- umbono olungileyo kunye nobungcali ngexesha sebenza nalo naluphi na uhlobo lomthengi. Kuya kufuneka sibe nomyalelo kwaye sihambelane nothotho lweemfuno zobuchwephesha ubuncinci ukuze umthengi aneliseke ngumsebenzi.
Omnye mfa nekiso (nokuba ilogo, icon, imagotype okanye enye into) kufuneka ziveze ngendlela enocwangco Kuxhomekeka kwiimfuno zabathengi, kufuneka siqinisekise ukuba umsebenzi wethu ufikelela kumthengi ngendlela enocwangco neqondakala lula ukuze ukusetyenziswa kwayo kwenziwe ngokuchanekileyo.
Kuyacetyiswa kakhulu ukuba kuncinci Isikhokelo esisisiseko namanye amanqaku malunga nendlela yokuthumela i-logo kumthengi, la manqaku amancinci aya kusinceda ukuba singalibali iikhonsepthi ezisisiseko ngalo mbandela.
1 Yintoni efunwa ngumthengi?
2 Soloko ulandela isicatshulwa
3 Ndizithumela njani iifayile kumthengi?
Yintoni efunwa ngumthengi?
Kuya kufuneka sikubuze kuqala into oyifunayo. Kuxhomekeka kwiimfuno zomthengi, siya kuthumela ezinye iifayile okanye ezinye. Isitampu? watermark? Siza kukubuza ngokucacileyo ukuba yintoni ekufuneka uyazi ukuba zeziphi iifayile ekufuneka sikuthumele zona.
Soloko ulandela isicatshulwa
Iimpawu zombhalo kufuneka zihlale zilandelwa ngaphambi kokuyithumela kumthengi. Singakuthumelela i- typography yoqobo Okuqhotyoshelwe kwi-imeyile ukuba sifuna ukuba umthengi abe nayo.
ukuba Khuphela isicatshulwa kwi-Illustrator Into ekufuneka siyenzile kukukhetha isicatshulwa kwaye kwimenyu ephezulu ucofe ukhetho Guqula kwiijika.
Nje ukuba sibe nayo Itekisi elandelelweyo umxhasi uya kuba nakho ukusebenza nefayile yoqobo ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwengxaki enxulumene nokubhala. Kuyacetyiswa ikunike typography yoqobo kwimeko kwixesha elizayo ufuna ukwenza uhlobo oluthile lotshintsho kumfanekiso wakho wequmrhu.
Ndizithumela njani iifayile kumthengi?
Umthengi unokuba njalo thumela iifayile ngokukhululekileyo pero zicwangciswe ngeefolda ke unokuzisebenzisa ngokulula. Ungongeza ifayile ye Incwadana yemanyano icaciswa phi njani Sebenzisa uphawu ngokuchanekileyo, Unokongezwa ividiyo apho ucebiswa khona malunga noku ngamandla ngakumbi. Injongo yesi sikhokelo kukuba Ukwazisa umxhasi, indlela esenza ngayo ayinamsebenzi ukuba nje uqonde njani. Kwimeko apho umthengi esicela incwadi yemanyano, kuyacetyiswa ukuba ubize imali eninzi ngayo.
Nanini na xa sisebenza nomthengi, into ekufuneka siyenzile yile yenza iifolda ezinomfanekiso wobumbano ngamacandelo, Ezinye zazo zezi zilandelayo:
Iindidi zemifanekiso eqokelelweyo (logo, icon, imagotype ... njl.)
Isikali (100%, 75%, 25%)
Umbala / umnyama nomhlophe
Ukuba umfanekiso wethu wequmrhu uneenguqulelo ezininzi (isicatshulwa, umfanekiso, isicatshulwa kunye nomfanekiso) kufuneka Yahlula izinto ngokwahlukeneyo kwaye uzilungiselele kwifolda. Siza kulungiselela iinguqulelo nganye ukuze ifumaneke kwizikali ezintathu, umbala, mnyama namhlophe, kunye nezinye iigradients apho ukucutha kweewatermark kunokwenzeka kuncitshisiwe.
Kunconywa kakhulu buza umthengi into abayifunayo Ngaphambi kokulungiselela wonke lo msebenzi, sisenza iinguqulelo ezininzi kwaye umxhasi ufuna enye kuphela. Inkqubo ye- Unxibelelwano nomthengi lubalulekile ezinokunceda omabini amaqela afumane iziphumo ezilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ungayithumela njani ilogo kumthengi ngendlela eyiyo
Ipeyintwe kwi-Starbucks napkin
UPeter sanchez sitsho
Funda le Milagros «Ex Yam» Guevara Bendezu
Phendula kuPeter Sánchez
Susa i-moles kunye nokusilela kwesikhumba ngeAdobe Photoshop